Cagbapu Coronavirus: North Korea Tourist Resort chọrọ ndị ọbịa si China
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ North Korea na -agbasa » Cagbapu Coronavirus: North Korea Tourist Resort chọrọ ndị ọbịa si China
Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi China • omenala • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • Akụkọ North Korea na -agbasa • Iwughachi • Akụkọ South Korea na -agbasa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Dabere na North Korea, enwebeghị otu ikpe Coronavirus na mba a dịpụrụ adịpụ. Nkwupụta a nke ọtụtụ ndị ọkachamara na-abụghị ndị ụka na-agbagha. Nnukwu ntiwapụ na North Korea nwere ike ịnwe nsonaazụ na-agbawa obi n'ihi na usoro ahụike ya na-emebi emebi. Ọrịa ahụ akpatakwala akụnụba North, tinyere mmachi nke UN yana ọtụtụ ọdachi ndị na-emere onwe ha n'oge okpomọkụ a
Njem nleta bụ otu n'ime ndị na-akpata ego na North Korea. Otu onye ọrụ gọọmentị gara ebe ugwu na-ejikọ aka ya na South Korea na-emekọrịta ihe n'oge gara aga wee tụlee mbọ iji wughachi ya na "ebe ọdịnala nke ụwa niile na-enwere anya," ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi steeti kwuru na Sọnde.
Tupu ọrịa a efe, North Korea nọrọ n'ụlọ ọbịa ndị njem nleta Chinees na North Korean touris ebe.
N’ịbụ nke South Korea wuru, ebe njem nleta na North Korea na-anọdụ n’ebe ugwu nke ókèala Korea na ọtụtụ narị kilomita site na mpaghara North na China. Njikọ ụgbọ njem na-adịghị mma na North Korea na-eme ka o sie ike iweta ọtụtụ ndị njem nleta China.
Ndị ọkachamara na-enwe obi abụọ ma ọ nwere ike ịmalite ma gbanwee mpaghara ahụ ka ọ bụrụ ebe ndị njem na-enweghị nkwado site na South Korea.
North Korea nwere ike itinye nrụgide na South Korea iji rite uru na njikọ akụ na ụba dịka ọrịa a na-eme ka nsogbu akụ na ụba North Korea dịkwuo njọ.
N'oge njem njem na ebe a na-eme Diamond Mountain, Premier Kim Tok Hun "kwusiri ike mkpa ọ dị iwulite ebe ndị njem nleta n'ụzọ nke anyị iji jikọta omume mba na oge a mgbe ha na-emekọrịta ihe nke ọma," ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi Korea Central kwuru.
Kim kwuru na North Korea na-achọ ime ka mpaghara ugwu ahụ bụrụ "nke ama ama maka ijere ndị mmadụ ozi na ebe ọdịnala nke ụwa niile na-enwe anyaụfụ." Ya na ndị isi ndị ọzọ kwurịtara banyere nhazi na iwu nke "ụlọ oriri na ọ worldụ worldụ zuru ụwa ọnụ, ebe a na-egwu golf, ebe a na-egwu ski," dị ka KCNA si kwuo.
North Korea ejirila usoro ihe njegharị jikọta ọnụ na ugwu na South Korea maka ihe dịka afọ 10 tupu a kwụsịtụrụ ya mgbe ogbugbu nke onye njem South Korea na-aga njem na 2008. Ihe dị ka nde mmadụ abụọ South Korea ndị njem nleta gara ebe a, bụ ebe dị ụkọ ego mba ofesi maka ndịda dara ogbenye North.
Mgbe mmekọrịta dị mma n'afọ ndị na-adịbeghị anya, Koreas abụọ ahụ kwalitere ịmaliteghachi ọrụ akụ na ụba akụ na ụba gụnyere njem njem nke Diamond Mountain. Mana Seoul mechara nwee ike ime nke ahụ n'emeghị ka a taa ahụhụ ntaramahụhụ UN nyere na mmemme nuklia North.
Ná ngwụsị afọ gara aga, North Korea iwe ji kwusiri ike maka mbibi nke ụlọ oriri na ọ otherụ Southụ South Korea mere na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ebe ezumike ahụ ma chọọ ka South Korea ziga ndị ọrụ na saịtị ahụ iji kpochapụ ụlọ. Onye isi North Korea Kim Jong Un kpọrọ ụlọ ọrụ South Korea "ihe nzuzu" na "ihe na-adịghị mma."
Ma na Jenụwarị, North Korea yigharịrị atụmatụ nkwatu ahụ maka nchegbu gbasara mgbasa nke coronavirus ..
Leif-Eric Easley, onye prọfesọ na Mahadum Ewha na Seoul, kwuru na oge nke nkwupụta okwu North Korea nke Sunday bụ ihe gbasara njem nleta na ihe gbasara nrụgide ndọrọ ndọrọ ọchịchị. "Site n'inwe olile anya Seoul maka itinye aka n'ihe egwu," North Korea na-arụ ọrụ na South Korea "ịchọta ụzọ iji weghachite uru ego maka North," ka o kwuru